Gumiguru 2018 | Save A Train
Mwedzi: Gumiguru 2018
musha > Gumiguru 2018
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi South Africa ndiyo nyika kufara, kusiyana, uye akapfuma nemagariro kukosha. Zvinofungidzirwa kuti pedyo 17 miriyoni Vashanyi akaenda South Africa gore rapera chete, uye iri nhamba kuti ingangova kukura gore rino. Zviri nzvimbo yakanaka…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Mumakore 10 makore, mamiriyoni mawana zvinobatsira kutora chitima! Rich minda greenery, ikapenya coastlines uye pristine kumboongororwa gomo zviri kumbobvira anotaurwa mabhurocha kufamba kana vanyora. Kutora chitima chinhu kunonakidza, nyore uye chikwama-ushamwari nzira…